माधव पक्षका गोकर्णविष्टसहित आठ सांसदलाई किन सोधिएन स्पष्टीकरण ? कारण यस्तो « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
माधव पक्षका गोकर्णविष्टसहित आठ सांसदलाई किन सोधिएन स्पष्टीकरण ? कारण यस्तो
काठमाडौ, ७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षका गोकर्णविष्टसहित आठ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली सोमवार मध्यराति २ बजेसम्म बालुवाटारमा आफूनिकट नेताहरुसँग बसेर ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने तयारीमा रहेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको सूची बनाउँदै गर्दा गोकर्णविष्टसहित आठ सांसद परेनन् । आखिरी किन परेनन् माधव नेपाल पक्षका आठ सांसद स्पष्टीकरणमा ? आठ सांसदले माधव नेपालको खेमा छोड्न लागेका हुन् , या अन्य केहि अहिले चर्चापरिचर्चा हुन थालेको छ ।
ओलीले केही दिनयता लगातार माधव नपाल पक्षका धेरैजसो सांसदसँग टेलिफोन र भेटेरै कुराकानी गर्नुभएको थियो। यसरी सोधिनेमा गोकर्ण विष्टलगायतका सांसद पनि एक रहेको स्रोतले जनाएको छ । विष्टसहित आठ सांसद पार्टी एकताको पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण नसोधेका बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसदमध्ये माधव नेपालको पक्षमा आइतवारसम्म ३५ जना छन्। मंगलवार स्पष्टीकरण सोधिने सांसदहरुको सूचीमा नेपाल पक्षका ८ जना सांसदको नाम नदेखिएपछि सो समूहमै चर्चा चलेको एक नेताले बताउनुभयो । नेपाल पक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित २३ जना सांसद रहेकोमा गुल्मीका गोकर्ण विष्ट, सुर्खेतका ध्रुव शाही र दैलेखका राजबहादुर बुढालाई स्पष्टीकरण माग्न नपर्ने बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।
उनीहरुले माधव नेपाल क्याम्प छोडेका हुन् त रु बालुवाटार स्रोतले क्याम्पको विषयमा प्रष्ट जवाफ नदिई विष्टलगायत आठ सांसद पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको दावी गरेको छ । नेपाल पक्षमा १२ जना समानुपातिक सांसद रहेकोमा ५ जना स्पष्टीकरणबाट जोगिएका छन् । बिना बुढाथोकी मगर, गंगा चौधरी सतगौंवा, समिना हुसेन, कलिला खातुन र पार्वती बिसुंखेलाई स्पष्टीकरण सोध्न आवश्यक नदेखिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ । स्पष्टीकरण सोधिएका अन्य सांसद पनि पार्टी एकताको पक्षमा उभिए उनीहरूलाई कारवाही नहुने बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।